टिमकाे आवश्यकता अनुसार शरद टिममा पर्छन- पटवाल (अन्तरवार्ता) | Neplays.com
टिमकाे आवश्यकता अनुसार शरद टिममा पर्छन- पटवाल (अन्तरवार्ता)
By Neplays	 Last updated Jan 28, 2019
नेपालले सिरीज जित्नकालागि भाेली अन्तिम खेल खेल्दैछ । साे खेलका अगाडी नेपालका ब्याटिङ सल्लाहकार उमेश पटवालले नेप्लेजसँग गरेकाे कुराकानी-
ब्याटिङको तयारीले नै त्यो सफलता पाएका हौं ?
हामीले युएई टुर शुरु गर्दै थियौं हामी यसलाई ऐतिहासिक बनाउनु पर्छ भनेर प्लान गरेका थियौं । हामी त्यसमा सफल पनि भएका छौं । हिजोको खेलमा रोहितकुमार पौडेलले अर्धशतक बनाएर इतिहास कायम गरेका छन् । उनको प्रदर्शनले नेपाललाई विश्वमा चिनाउन सफल भएको छ । म भन्नसक्दिन की हामीले त्यस्तो तयारी गरेका थियौं । तर नेपाली व्याट्सम्यानहरुले हिजो सुझबुझ पूर्ण पारि खेले । नेपाली खेलाडीले सुरु र अन्त्यमा राम्रो प्रदर्शन गरे । तर बीचको अर्डरमा केही समस्या थियो । यो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा देखिने समस्या पनि हो । एक दिवसीयमा मध्यक्रममको ब्याटिङ समस्यानै हुन्छ । तर भारतको सवालमा भने उसले २ जना स्पिनर राखेर फाइदा लिने गरेको छ ।
हामीले ब्याटिङ प्लान गरेका थिएनौं, के क्रमिकरुपमा व्याटिङ अर्डर राम्रो बनाउँदै आएका हौं ?
निश्चयनै, हामीले त्यसका लागि केही तयारी गरेका थियौं । ब्याट्सम्यानलाई थाहा छ की कस्तो खेलाडीको बल सामना गर्न जाँदैछु । साथै उनीलाई थाहा हुनुपर्छ की विकेट कस्तो छ र त्यहाँ कस्तो सट खेल्ने भनेर । नेपाली खेलाडीहरुले यस्तो पीच खेलिसकेकाले उनीहरु प्रष्ट थिए कस्तो खेल्ने भनेर ।
भोलिको ब्याटिङ अर्डर कस्तो हुन्छ ?
हामी त्यति प्लान गर्दैनौं । जव खेल शुरुहुन्छ त्यसपछि योजना बनाउँछौं । प्रशिक्षक र कप्तानले कुनै पनि निर्देशन दिन सक्दैन । निर्देशन दिने भनेको क्रिजमा रहेको अर्को ब्याट्सम्यानले हो ।
सोमपालको विषयमा के हुन्छ ?
उ राम्रो खेलाडी हो । उसले राम्रो प्रदर्शन पनि गरेको छ । पहिलो खेलमा चार नम्बरमा ब्याटिङमा ल्याएका थियौं । दोस्रो खेलमा ८ नम्बर ल्यायौं । उसले ब्याट र बल दुवैमा राम्रो प्रदर्शन गरेको छ । उसको भूमिका टिमको आवश्यकता अनुसार तय हुने छ ।
पहिलाका खेलहरुमा ओपनिङ पार्टनरसिपको राम्रो भएका थिएनन् तर हिजो ६१ रनको साझेदारी गरे यसमा तपाईको धारणा ?
हामीले एक दुई इनिङ हेरेर यसमा कमेन्ट गर्नु हुँदैन । हामीले लामो समयसम्म हेर्नु पर्छ । यो भर्खर सुरुआत हो । की उनीहरुले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्ने मौका दिनु पर्छ । तर पनि म खुसी छैन् । जम्मा ६१ रनको साझेदारी त्यति ठूलो होइन । त्यो भन्दा राम्रो साझेदारी गर्न आवश्यक छ ।
मिडिल अर्डरमा योङस्टारको प्रदर्शन ?
राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । योङ स्टारकै बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा छ । तिनीहरु अहिले टिममा परेका छन् साथै केहीले प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । अहिले टिममा रहेकाले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसके बाहिर भएका खेलाडीहरुलाई ल्याउनु पर्छ । त्यसैले उनीहरुकाबीचमा पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । यो नेपाली क्रिकेटका लागि पनि एकदमै राम्रो कुरा हो ।
शरद भेषावकर टिम बाहिर रहँदा रोहित र आरिफले राम्रो खेलेका छन् के अब शरदलाई कमब्याक हुनलाई गाह्रो छ?
यो विषयमा कमेन्ट गर्नु अलि हतार हुन्छ । यो खेलाडीको प्रदर्शनमा भर पर्ने कुरा हो । यो टिमका लागि कस्तो खेलाडी आवश्यक पर्छ त्यसैका आधारमा चयन हुन्छ । अनुभवी र नयाँ दुवै खाले खेलाडीको आवश्यकता टिमलाई परिरहन्छ ।
भोलिको खेलका लागि केही परिवर्तन ?
अहिलेनै निश्चित भइसकेको छैन । भोलि विहान मात्रै थाहा हुन्छ । हामीले विकेट देखेपछि मात्रै यस विषयमा निर्णय लिन्छौं ।
पवन शर्राफलाई मिडिल अर्डरमा ल्याउने सम्भावना कति छ ?
पवन प्रतिभावान खेलाडी हो । उसले टप अर्डरमा पनि राम्रो खेलेको छ । मिडिल अर्डरमा पनि राम्रो छ । मैलो भन्ने हो एकदिवसीय क्रिकेटमा पवनले मिडिल अर्डरमा खेल्दा टिमका लागि राम्रो हुन्छ । टप अर्डरका व्याट्सम्यानहरुले एक देखि छैटौं नम्बरसम्म ब्याटिङ गर्न सक्नु पर्छ ।